ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲ ..? by popolay.com
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲ ..?
10 Oct 2018 3,131 Views
ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝနေသူတွေအကြောင်းကို အရင်ဆုံး လေ့လာအတူယူသင့်ပါတယ်။ သင့်ကို သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် သင်ကြားပြသပေးနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူက သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီလျံနာတွေလည်း အတူတူပါပဲ။ အောက်ပါ အချက်တွေထဲက တစ်ချို့အချက်တွေဟာ သင့်ဘ၀ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေပြီး သူတို့လိုပဲ သုံးမကုန်တဲ့ ဓနဥစ္စာကို တည်ဆောက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်လာစေနိုင်ပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရော စိတ်ဓာတ်အတွက်ပါ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိတဲ့အကြောင်း သိပ္ပံနည်းအရလည်း သက်သေပြပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့် မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် သူဌေးတွေနဲ့ ဘီလျံနာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဥစ္စာဓနကို ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း ပရဟိတ လူမှုရေးအလုပ်တွေကနေ တဆင့်၊ တစ်ချို့တွေကတော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ တဆင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လောကကောင်းကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
ရှေးဟောင်းစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ စောစောထတဲ့ ငှက်က ပိုးကောင်း ပိုစားရတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုဟ်တွေဟာ မနက်ခင်းမှာ အိပ်ရာကနေ စောစောထတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ တကယ်အလုပ်မစခင် သုံးနာရီလောက် စောပြီး အိပ်ရာထတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးတတ်ကြတယ်
အောင်မြင်ချမ်းသာသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဘဏ်စာရင်းထဲမှာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြပေမယ့် စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်သုံးနေတတ်ကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ ချမ်းသာသူတွေအားလုံက ချွေချွေတာတာပဲ နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကို အေးချမ်းမှု တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။
၅။ လုပ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်
Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ တည်ဆောင်သူဟောင်း Steve Jobs က သင် လုပ်ချင်တာကို သင်ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေရမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကြီးအကျယ်အောင်မြင် ချမ်းသာလာဖို့ ဆိုတာက သင်လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေမှပဲ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ ဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိသေးရင် သိတဲ့အထိ မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ပြီး ရှာဖွေပါ။
ကမ္ဘာမှာ အအောင်မြင်ဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်တွေ အားလုံးက စာဖတ်များသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီး Warren Buffett ဟာ သူ့တစ်နေ့တာရဲ့ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းသော အချိန်တွေကို စာဖတ်နေတတ်ပါတယ်။ Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ဟာ နှစ်ပတ်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ဖို့ သန္နိဌာန်ချခဲ့ပါတယ်။
၇။ ၀င်ငွေလမ်းကြောင်းတွေ အများကြီး ဖန်တီးထားတယ်
အချမ်းသာဆုံးလူတွေဟာ ၀င်ငွေကို အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ ၀င်ငွေလမ်းကြောင်းတွေ အများကြီး ဖန်တီးထားတာက အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။
၈။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေ ဖြစ်တယ်
ဘီလျံနာတွေအားလုံးဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ သူများအလုပ်ကို မလုပ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရယူနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ဟာ အသက်(၁၉)နှစ်မှာကတည်းက Facebook ကို စတင်လုပ်ကိုင်နေပါပြီ။
အောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရုံးခန်းထဲမှာပဲ ပိတ်လှောင်ထားတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အားလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကပဲ မှတ်ဥာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်မှုတို့ကိုလည်း မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ အခြားအောင်မြင်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းတယ်
အောင်မြင်ချမ်းသာသူတွေ အားလုံးဟာ အခန်းထဲမှာ အတော်ဆုံး၊ အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့ လူတွေနားမှာပဲ နေတတ်ကြပါတယ်။